Akara ngosi ụlọ ahịa China n'èzí maka ndị na-emepụta Chaoshifa na ndị na-ebubata ya |Zhengcheng
A haziri akara ọnụ ụzọ mara mma nke ọma maka nnukwu ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa agbụ na nnukwu ụlọ ahịa ọkọlọtọ.Igbe ọkụ dị na nha dị iche iche, na agba na logo nke akara nwere ike ịhazi ya.
Aha ngwaahịa: Akara ụlọ ahịa dị n'èzí
Ngwa: Supermarket, nnukwu ụlọ ahịa, ọdụ mmanụ ụgbọala, ụlọ ahịa na-ere ahịa, ụlọ ahịa nri n'ihu
1.Ihe kachasị mma nke ngwaahịa a bụ na isi agba nke akara ngosi bụ oji n'oge ehihie, ma n'abalị, mgbe ọ gbanyechara ọkụ ọkụ, isi agba nke akara ngosi na-acha ọcha, nke na-egbuke egbuke ma na-adọrọ mmasị.
2. A na-emepụta akụkụ logo na igbe ọkụ site na igwe ọnya.A na-eji aka tinye mmanya mmanya acrylic dị na akara ngosi.
3. Ogologo akara akara na nnukwu ụlọ ahịa na-adịkarị ogologo ma ọ bụchaghị ogologo.Ịhọrọ igbe ọkụ Zhengcheng nwere ike dozie nsogbu a nke ọma.Ojiji nke igbe ọkụ nkuku nwere mgbanwe okike ma mara mma nke ukwuu.
4. Ịwụnye led ìhè igbe ụlọ ahịa n'ihu akara na supermarkets ga-maa-eri a otutu ọkụ eletrik.Igwe ọkụ LED nwere ikike nke ejiri na igbe ọkụ Zhengcheng na-echekwa 65% nke ọkụ eletrik ma e jiri ya tụnyere tubes LED nkịtị.
Ị nwere ike ịhọrọ igbe ọkụ nke ịdị elu kwesịrị ekwesị dị ka nha ụlọ ahịa ahụ si dị, ma kewaa igbe ọkụ nke otu nha n'ime mpempe akwụkwọ akara, na-arụ ọrụ mara mma na ikuku ọkụ, nke na-eme ka onyinyo ahụ dịkwuo mma.
Nke gara aga: Ahịa akara ihu maka ụlọ ahịa dị mma KH24H
Osote: Ihe akara akara acrylic edu n'èzí
Igbe ọkụ menu maka tebụl ịtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Akara ngosi, Igbe nrịbama nke mpụga, Ihe nrịbama ụlọ ahịa,